यौन सम्बन्ध कायम गरेपछि महिलाहरुलाई पश्चाताप किन हुन्छ ? यस्तो रहेछ कारण | Rajmarga
यौन सम्बन्ध कायम गरेपछि महिलाहरुलाई पश्चाताप किन हुन्छ ? यस्तो रहेछ कारण
अचानक कसैसँग शारीरिक सम्बन्ध कायम हुनुलाई क्याजुअल सेक्स भन्ने गरिन्छ ।स्पष्ट छ यसमा सहमति र रुची पनि हुन्छ । क्याजुअल सेक्सपछि अक्सर युवतीहरुमा खेद वा पश्चातापको भावनाले घर गर्ने गर्दछ ।
हालै सार्वजनिक एउटा अध्ययनमा पाइएको थियो कि ‘वन नाइट स्ट्यान्ड’ मा पुरुषको तुलनामा महिलाहरुलाई बढी विस्मत र पश्चाताप हुने गर्दछ।
शोधकर्ताहरुले नर्वेको युनिभर्सिटीमा ५४७ र अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा २१६ जना छात्राहरुमा गरेको कुराकानीको आधारमा यो निष्कर्ष निकालिएको हो । शोधमा सहभागीहरु कोही पनि समलैंगिक थिएनन् । यी सबैसँगको कुराकानीबाट धेरै कुरा स्पष्ट भएको छ।
क्याजुअल सेक्समा युवती र युवकहरुको सोच बिल्कुल अलग हुन्छ । यो अध्ययनमा पाइयो कि महिलाहरुलाई उनीहरुका पार्टनर सक्षम र यौन सम्बन्धका क्रममा सन्तुष्ट गर्ने खाले फेला पारे भने उनीहरुमा भित्रैबाट खेदको भावना आउँदैन ।
यो अध्ययनमा सहभागी भएका सबै जना नार्भियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलजी (एनटीएनयू) र युनिभर्सिटी अफ टेक्ससका थिए । सबैको उमेर ३० वर्षभन्दा कम थियो ।
पहिला गरिएको अध्ययनमा पाइएको थियो कि क्याजुअल सेक्समा पुरुषलाई महिलाको तुलनामा धेरै कम पश्चाताप हुने गर्दछ ।यसका साथै यो पनि भनिएको थियो कि यसको कुनै अर्थ हुँदैन कि सेक्सको पहल कस्ले गरेको थियो ।
युनिभर्सिटी अफ टेक्ससका प्रोफेसर डेभिड बजले भने–यदि सेक्सका लागि महिलाले पहल गरेका छन् भने यसबाट दुई विशेष कुरा आउँछ । पहिलो यो कि सेक्सलाई लिएर दिमागमा सकारात्मक भावना छ भने यौन सम्बन्धका क्रममा कामुकता खुलेर आएको देखिन्छ ।
दोस्रो कुरा महिला खुलेर आफ्नो इच्छा व्यक्त गरिरहेकी छन् भने उनीभित्र कुनै अपराधबोध हुने छैन । यस्तोमा खेदको भावना महिलाहरुभित्र शून्य बराबर हुन्छ । किनभने यसमा कुने पनि प्रकारको दबाव हुँदैन।
टेक्सस युनिभर्सिटीका प्रोफेसर जाय पी बाँकाँफका अनुसार यौन सम्बन्धमा महिलाहरुको सहमतिले धेरै अर्थ राख्दछ । उनका अनुसार खेदको भावना एउटा अप्रिय र तनावमा पार्ने भावना हुन्छ ।
यो अध्ययनबाट यो कुरा पनि खुलासा भएको छ कि सम्बन्ध बनाउने विषयमा स्वयमको र दबावमुक्त निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
उत्तम यौन सम्बन्ध
यो अध्ययनका अनुसार सेक्सपछि महिलामा पश्चातापको भावना आउनेछ वा आउने छैन यो उसको पार्टनरको यौन क्षमतामा निकै हदरसम्म निर्भर गर्दछ । यदि यौन सम्बन्ध सफल रह्यो भने यसमा महिलामा पश्चाताप वा खेदको भावना हुँदैन ।
तर, महिलाका लागि निर्णय लिन यति सजिलो भने हुँदैन । उनको मनमो गर्भवती हुने त्रास पनि रहन्छ । अध्ययनका अनुसार पुरुष पार्टनरको क्षमता महिलाहरुका लागि निकै महत्व राख्दछ । सेक्समा पार्टनरको कामुकता र क्षमताबाट महिलाहरुलाई भावनात्मक स्तरमा बढी फाइदा प्राप्त हुन्छ ।
अचानक बन्ने यौन सम्बन्धमा कुने यस्तो कारण हुन्छ, जसले दुवैका लागि खेद र पश्चातापको स्थिति सिर्जना हुन्छ । नैतिकताको स्तरमा पनि खेदको भावनाले घर गर्ने गर्दछ ।
फोहोरका कारण पनि यस्तो यौन सम्बन्धबाट विकर्षण उत्पन्न हुन्छ । मानिसहरु यौन संक्रमणलाई लिएर पनि क्याजुअल सेक्सदेखि डराउने गर्दछन् । बीबीसी हिन्दीबाट अनुदित
Previous post: आधुनिक प्रविधि नहुँदा सामाजिक सञ्जालमा हुने ठगी गिरोह पक्रन कठिन
Next post: मुटुरोग के हो ? मुटुरोगबाट कसरी बच्ने ? यस्तो छ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर बस्नेतको सुझाव (भिडियोसहित)